विनिता कुमालको घर पुग्दा गाई-गोरु हेर्दै, यी सानी नानीको कुराले रोकीएन आँशु ।। (भिडियो हेर्नुस्) – Khabar28media
विनिता कुमालको घर पुग्दा गाई-गोरु हेर्दै, यी सानी नानीको कुराले रोकीएन आँशु ।। (भिडियो हेर्नुस्)
July 28, 2021 August 9, 2021 - by Vikash - LeaveaComment
विनिता कुमालको घर पुग्दा गाई-गोरु हेर्दै, यी सानी नानीको कुराले रोकीएन आँशु ।। (भिडियो हेर्नुस्) विनिता कुमालको घर पुग्दा गाई-गोरु हेर्दै, यी सानी नानीको कुराले रोकीएन आँशु ।। (भिडियो हेर्नुस्)अन्तिममा राखिएको छ पुरा हेर्नुहोला, यो खबर पनि पढ्नुहोस् !!
स्वास गनाउने समस्या छः यसो गर्नुहोस्, स्वास गनाउने समस्या छः यसो गर्नुहोस् समस्याबाट छुटकारा पाउनुहुनेछ ! (टिप्स सहित) विज्ञानले विहान स्वास गनाउने समस्यालाई ‘ह्यालिटोसिस’ भन्छ। दाँत सफा नगर्ने बानीले गर्दा, सुत्ने तरिका नमिल्दा अनि केही खानेकुराह खाँदा विहान स्वास गनाउने गर्दछ।
राति सुत्दा मुख सुक्खा भयो भने पनि स्वास गनाउने गर्दछ। हुन त दुर्गन्धित स्वास हुनुका कारणहरू थुप्रै छन्, तर त्यी समस्यालाई समाधान गर्ने तरिकाहरू पनि पक्कै थुप्रै छन्।तीमध्येकै केहि सम्भव तरिकाहरू यसप्रकार रहेका छन् केहि सम्भव तरिकाहरू यसप्रकार रहेका छन् :
विहान उठ्दा स्वास गनाइराखेको छ भने तपाईँको जीब्रोमा बाक्लो सेतो लेउ लागेको हुन सक्छ। यस्तो लेउमा स्वासलाई दुर्गन्धित बनाउने ब्याक्टेरियाहरू जम्मा भएर बसेका हुन्छन्। त्यसैले दाँत माझेपछि नरम ब्रसले जीब्रोलाई हलुका सफा गर्ने बानी बसाल्नुहोस्। जीब्रो सफा गर्दा बढी बल प्रयोग गर्नुभयो भने, जीब्रोका टेस्टमा क्षति पुगि स्वादको पहिचान गर्न कठिनाइ सक्छ।
अल्कोहलको मात्रा भएका मुख कुल्ला गर्ने तरल पदार्थहरूले मुखलाई झन् बढी सुक्खा गराउँदछ। त्यसैले मुख कुल्ला गर्दा घरेलु उपाय अपनाउन पनि सकिन्छ। त्यसको लागि १ गिलास मनतातो पानीमा आधा चम्चा नुन राखेर घोल्नुहोस् र त्यस पानीले मुख कुल्ला गर्नुहोस्।
त्यसो गरेमा स्वासलाई दुर्गन्धित बनाउने ब्याक्टेरियाहरू मर्दछ। औषधी पसलमा अल्कोहल नमिसाइएको माउथवासहरू पनि पाइन्छन्, त्यसको प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी मुख कुल्ला गर्दा रातभरी मुखमा जम्मा भएर बसेका ब्याक्टेरियाहरू हट्छन् र स्वास गनाउने समस्यामा कमी हुँदै जान्छ।
सुत्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा सम्झिनुहोस्, “नाक सास फेर्नको लागि हो र मुख खानको लागि हो” केहि दिनसम्म सुत्नुभन्दा पहिले नाकले स्वास फेर्ने अभ्यास गर्नुहोस्, अनि सुत्दा पनि मुख बन्द गर्नुहोस् र नाकले नै स्वास फेर्नुहोस्।
ताजा र प्रशस्त पानी पाइने फलफूल, जस्तै गाँजर, काँक्रो, स्याउ, आदि दैनिक खानुभयो भने पनि सास गनाउने समस्यामा कमी हुन्छ। धेरै बोसो तथा चिल्लो भएका खानेकुराहरू नखाँदैमा उचित हुन्छ। त्यसले गर्दा मुखमा किटोन्स ९पभतयलभक० नामक रसायन जम्मा हुन्छ, जसले एकदमै दुर्गन्धित सास पैदा गराउँदछ। त्यसैले यस्ता खानेकुराहरू खानुभन्दा पहिले विचार पुर्याउनु जरुरी हुन्छ।
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि, प्याँज खाएपछि कत्तिको सास गनाउँछ भनेर१ हुन त प्याँज खानु स्वास्थ्यको लागि राम्रै कुरा हो, तर नराम्रो सासबाट मुक्त हुन चाहनुहुन्छ भने यस्ता खानेकुराहरू नखाँदै उचित हुन्छ। नियमित रूपमा लसुन, प्याँज सेवन गर्ने मानिसहरूको सास मात्रै होइन, पुरै शरीरबाट नै दुर्गन्ध आउने गर्दछ।
१०. चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस्
जुनसुकै उपायहरू अपनाउँदा पनि तपाईँको सास गनाउन छोडेन भने त्यो सामान्य अवस्था पक्कै पनि होइन। त्यस्तो अवस्थामा तुरुन्त चिकित्सकको सल्लाह लिनु आवश्यक हुन्छ। कम्तीमा पनि वर्षको एकचोटि सबैजनाले दन्त चिकित्सकसँग आफ्नो दाँतको जाँच गराउनु आवश्यक हुन्छ। त्यसो गरेमा तपाईँको दाँतमा तपाईँले थाहा नपाउने गरि आउने समस्याको पनि तुरुन्तै पहिचान हुन्छ र अझ बढी समस्या आउनबाट बच्न सकिन्छ । एजेन्सी सहयोग
Previous Article नेपालमै घट्यो विश्वास नै नलाग्ने घटना, आफ्नै श्रीमानलाई एस्तोसम्म गरेपछी हेर्नुस् अचम्म ।। (भिडियो हेर्नुस्)
Next Article दुखत खबर गुल्मीमा जिप दु’र्घटना ४ जनाको घ’टनास्थलमै मृ’त्यु मृ’तक सबैको सनाखत